SoundPeats Q30, anyị na-enyocha ọdịyo dị elu na ọnụ ala dị ọnụ ala | Akụkọ akụrụngwa
SoundPeats Q30, anyị na-enyocha ọdịyo dị elu na ọnụ ala dị ọnụ ala
Igweisi ekweisi na-enweghị eriri bụ ihe ama ama onye kwuo uche ya, nke dị anya na ihe mere n'oge gara aga, mgbe anyị hụrụ njirimara ndị a na ngwaọrụ dị oke ọnụ yana obere ndị na-ege ntị. Taa, anyị nwere n'aka anyị (ma ọ bụ karịa na ntị anyị) ihe SoundPeats Q30, ekweisi ikuku nwere ọtụtụ ohere yana ọnụahịa mara mma nke ukwuu.
Ka ọ dị na mbụ, Anyị ga-enyocha akụkụ kachasị mma nke ekweisi ndị a iji nweta ọtụtụ ego anyị ma mara ma anyị eche ihu ekweisi na ogo anyị. Ya mere, nọnyere anyị oge niile, ị nwere nyocha kacha mma na Ngwaọrụ Actualidad.
1 Ọdịdị ekweisi
1.1 Ihe ngwugwu
3 Njikere maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla
Anyị malitere na mbụ, imewe site ọkọlọtọ. Lee SundPeats achọghị imepụta nke ukwuu site na ịpụpụta maka imewe nke dị taa na na ana achi achi ị ihe ịga nke ọma na dịkarịa ala. Igweisi a nwere usoro ntị n'ime ya na nko nke kpochapụwo nke ga-eme ka mpempe ntị anyị (ọ bụghị n'ụdị mpempe akwụkwọ) ma gbochie ha ịmịcha n'ihi nlekọta. Ihe omume a, n'etiti ndị ọzọ, na-eme SoundPeats Q30 ezigbo ekweisi maka ịme egwuregwu na-ege egwu kachasị amasị anyị, dịka ọmụmaatụ.
Igwe okwu SoundPeats Q30
Nkwụnye rubbers x5
Cable clip na mwekota
Eomi akpụkpọ anụ na-ebu akpa
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ (asụsụ 5, gụnyere Spanish)
Abụọ ekweisi na-jikọrọ site a mkpa USB etre naanị site na multimedia akara akpu. Na mgbakwunye, anyị ga-enwe akpa nke ga-etinye ihe ruru isii ntị ntị na ihe nkwụnye ntị iri ga-enwe ike ịnwe ahụ iru ala na ha n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla. Igweisi ekweisi a nwere akụkụ nke Sentimita 63,5 x 2,5 x 3,2, mgbe ha na-bụ nnọọ ìhè, anyị na-eche ihu naanị 13,6 grams nke ngụkọta ibu.
Akụrụngwa dịkwa mkpa, na isi okwu ihe mbụ, enweghị obi abụọ, bụ ogo nke ọdịyo. SoundPeats, ọ bụ ezie na ọ na-enye ngwaahịa dị ọnụ ala, nwere sistemụ Aptx, kodeks kwekọrọ na ọdịyo dị elu, maka nke a ọ na-eji chipset Dị Bluetooth CSR8645 4.1 nke ga-enye ezigbo nnyefe data na obere oriri. Ihe a niile na-agwakọta ya na ndị ọkwọ ụgbọala milimita isii, na nkenke, ụda dabara adaba yana nke zuru oke na-echebara ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ, sỌ bụ ezie na ọ bụghị ụkpụrụ nke ndị ọzọ dị ka JayBird, buru n'uche na ha na-eri ihe dị ka okpukpu ise dị ala.
Autonomy dị ezigbo mkpa na ngwaahịa dịka ikuku dị ka nke a. Anyị na-enwe obi ụtọ 8 awa nke oge okwu ma ọ bụ egwu egwu (Play oge dịgasị site olu larịị na ọdịyo ọdịnaya, enyocha). Igweisi ekweisi ikuku ndị a nwekwara ruo elekere 100 nke oge njikere na ihe dị ka elekere na ọkara. A na-akwụ ụgwọ a site na microUSB cable nke gụnyere n'ime ngwugwu ngwugwu. N'ezie, obodo nwere ikike, o di ka awa asatọ nke SoundPeats kwere nkwa, ka anyi kwuo na odi ala, ma ọ bụ karịa karịa na-ezute maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị.
Njikere maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla
Akụkụ ọzọ nke ekweisi ndị a na-apụta ìhè bụ n'ụzọ ziri ezi na ntụgharị ha. Iji malite anyị nwere nguzo mmiri IPX6 nke ahụ ga-eme ka anyị soro ha na-emega ahụ n’atụghị ụjọ na anyị ga-agbaji ha n’ihi ọsụsọ, nke na-anaghị eme ka ha mikpuo onwe ha, ma na-eguzogide ọgwụ iji soro ha na-egwu egwuregwu n’atụghị egwu. Isi ihe doro anya na isi okwu ndị a. Anyị anwalela arụmọrụ ha na-eme egwuregwu ma anyị nwere ike ịsị na ha na-ejide ntị nke ọma na enweghị nsogbu ọ bụla., anyị enwetabeghị ọnwụ ụda ọ bụla.
Akụkụ ọzọ pụtara ìhè nke ngwaọrụ ahụ bụ na ha nwere magnet na akụkụ mpụta ya nke ahụ ga-enyere anyị aka isonyere ha, tụgharịa ha n'ụdị olu, nke nwere ezigbo nkasi obi na ekweisi dị ka nke a iji nwee ike ịgbanwe mwepụ na ntinye na-enweghị ịchekwa ha n'ime akpa ahụ ọzọ, nke kachasị mkpa, na-atụghị egwu na-efunahụ ha. Nke a ga - eme ka anyị jiri ha oge niile, anyị etinyela magnet a n'ule ma ọ kwụrụ chịm ma nwekwaa oke iji debe ekweisi echekwa.
Anyị na-anwale SoundPeats Q30 ndị a mgbe niile ma nke bụ eziokwu bụ na ha na-enye ụda nke ọma karịa ọtụtụ ekweisi ntị n'ime ọnụahịa a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ekweisi ikuku. Akụkụ ndị ọzọ dị na ntụgharị dị ka magnet na njikwa maka egwuregwu bụ otu ihe na-adọrọ mmasị ma a bịa inweta ngwaọrụ a, dị na Amazon site na euro 22,29.
O yiri ka ọ bụ ezi uche zụrụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ mbụ ị ga-esi nweta ngwaọrụ nwere njirimara ndị a, ị gaghị enwe ike inweta ihe maka obere, na-eburu n'uche ihe ndị ọzọ banyere ọdịyo na ihe ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » SoundPeats Q30, anyị na-enyocha ọdịyo dị elu na ọnụ ala dị ọnụ ala
Gam akporo Wear ga-agbanwe aha ya wear OS